ယွန်း: March 2010
အခုတလော ကွန်နက်ရှင်သိပ်မကောင်းတာနဲ့ ပိုစ့်အသစ်မတင်ဖြစ်သေးပါဘူး။
ကွန်နက်ရှင် ကျလိုက်တက်လိုက်နဲ့ကွန်ပြူတာရှေ့၂နာရီလောက် ထိုင်ပေမဲ့လည်း စိတ်တိုရတာပဲ
အဖတ်တင်ပါတယ်။ ဘိုးတော် ကွန်နက်ရှင်ကတော့ ဖြုံတောင်မဖြုံပါဘူး။
စာရေးသူ ယွန်း မှ 4:03 AM4comments:
စာရေးသူ ယွန်း မှ 12:43 AM 8 comments:
၁။ မင်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရောင် က အနီ ။ အနက်။အပြာ ။အစိမ်း။ အ၀ါ ? (တခုရွေးပါ )
၄၊ မင်း အဖြူရောင် ။အနကရောင် ဘယ်အရောင်ကိုပိုကြိုက်သလဲ?
၅၊ မင်းအချစ်ဆုံးလူရဲ့နာမည် (မိမိနှင့်အမျိုးတူုသောသူ
၆၊မင်းအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး NO ?
၇။ မင်းလေယာဉ်မောင်းရတာကိုကြိုက်လား ။ကားမောင်းရတာကိုကြိုက်လား?
၈။မင်း ရေကန် ကိုကြိုက်လား ။ ပင်လယ်ကိုကြိုက်လား?
စာရေးသူ ယွန်း မှ 8:34 PM 1 comment:
လူမြင်ကွင်းလမ်းဘေး ဘယ်ညာ မှာတွေ့ရတက်တာက
စာရေးသူ ယွန်း မှ 8:51 AM3comments: